Izinto okufanele wazi ngokusebenza e-Dubai | Theresa R. Fianko
Izinto okufanele wazi ngokusebenza e-Dubai
Ingabe i-Dubai i-Ideal Destination for Imindeni Entsha?
Kungani i-Dubai idume kakhulu nabashambile baseNingizimu East Asia?
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at June 7, 2019
Izinto okufanele uzazi ngokusebenza kuzo Dubai
I-Dubai yidolobha elihamba ngendalo yonke futhi elihlakaniphile elithandwa ngezizathu eziningi ezinhle njengokuthi a ibhizinisi, ihabhu yezokuvakasha nezokuvakasha. Cishe i-85% yesibalo sayo sabantu abalinganiselwa ezigidini ezingama-3 njengabaxoshwa, leli dolobha lanamuhla libone abantu abavela kuzo zonke izigaba zokuphila befuduka bezophila futhi basebenze lapha. Kunezizathu eziningi ezenza iDubai ingagcini ngokwamukela izivakashi kodwa indawo yokuthula yabahlali.
Uhulumeni nezikhungo ezizimele nezinhlelo zilawulwa yimithetho esebenza eDubai, ngakho-ke noma yimuphi umkhakha ozithola kufanele wazi futhi uqonde amalungelo akho ngaphambi kokwamukela umsebenzi. Amaqembu abasebenzi awathandwa kakhulu lapha, kepha UAE imithetho yezabasebenzi inakekela zonke izinhlaka zabasebenzi ukuqinisekisa ukuthi basebenza endaweni enobulungiswa, ephephile nenempilo.
Uhlelo lwezepolitiki lusekelwe kuMthethosisekelo we-UAE
I-Instagram Credit: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
Kukhona njalo izikhungo kuzo zombili izinhlaka zikahulumeni nezizimele eziqinisekisa ukuthi izinkinga zabasebenzi zisingathwa ngokuphumelelayo nangempumelelo phakathi kwabaqashi nabasebenzi. Kungumthwalo womabili amaqembu ukuqinisekisa ukuthi izinqubo ezilandelwayo zilandelwa ngokwemibhalo kanye nezinzuzo. Uma lokhu sekuphelile, umthetho uhlinzekela amaqembu ahlukumezekile uma kwenzeka izinkinga ezenzeka ngesikhathi noma ngemuva kokuqashwa. Kuwebhusayithi www.uaelaborlaw.com, uzothola ulwazi mayelana nezinzuzo nezisusa, amahora okusebenza, ama-shift namaholidi kanye nawo wonke amalungelo abaqashi nabasebenzi.
Uma usanda ku-Dubai noma ushintsha imisebenzi, qiniseka ukuthi ufunda futhi wazi imithetho yomsebenzi. Qonda le mithetho futhi ube yingxenye yenqubo yokuyisebenzisa ngaphambi, ngesikhathi nangemva komsebenzi wakho nenhlangano yakho ekhethiwe. Uma ungathanda izincazelo ezengeziwe kunoma yisiphi isigatshana esingase singacacisi kuwe, xhumana nanoma yiziphi izikhungo zabasebenzi futhi kuzoba khona ummeleli okhona ukuze akusize.
Uhlelo Lwezintela Luchazwe
I-Dubai inikeza inzuzo engenayo intela kuwo wonke umuntu osebenza kumholo wakhe. Lesi esinye sezizathu eziye zaheha ama-Expats avela kuwo wonke amazwe emhlabeni kuya edolobheni. Abantu basuka emazweni abo ukuze basebenze ukuze bazuze izinga eliphezulu lokuphila kwabo kanye nemindeni yabo. Umqondo wokungabi nalutho ukukhokha intela ngaphezu kwemali engenayo iyisiphuzo esamukelekile kunoma ubani osebenza e-Dubai. Indlela yokuphila iyisinqumo, ngakho-ke unganquma ukuthi ufuna ukuphila ngokuya kwimali engenayo. Kodwa-ke, uyazi ngokuqinisekile ukuthi noma yiliphi inani oliholayo liza kuwe ngokugcwele ngaphandle kokuthola intela. Kubantu abazimisele kakhulu ukusindisa, ukusebenza e Dubai kuzokunikeza ithuba.
Uma kwakuzoba khona ucingo olwenzelwa izizwe ezivela kuwo wonke amazwe emhlabeni e-Dubai, uzothola ummeleli ngamunye! Yile ndlela abasebenza ngayo eDairobi nase-UAE yonke. Kubantu abafuna ukuhlangenwe nakho okusebenzisana kwamasiko amaningi namasiko, ukhethe idolobha elilungile. Akuyona into evamile ukuthola izinhlangano ezisebenza ngabasebenzi abavela kubantu abakuzwe kuphela kodwa lokhu kungenzeka.
Okujwayelekile kunazo zonke kodwa ukuthi uzokwazi ukwabelana ngendawo yakho yokusebenza nabalingani bakho abavela emazwekazini nakwamanye amazwe. Ubuhle balokhu yiqiniso lokuthi bayakwazi ukusebenza ndawonye njengeqembu ngokuvumelana nokufeza izinhloso zebhizinisi nezinhlangano. Uzothola ukufunda ngamasiko ahlukahlukene, izimo, izindlela, izilimi kanye nendlela ejwayelekile yokuphila ngabantu abahlukene abavela emazweni ahlukene. Iningi lezinhlangano lihlela imicimbi yendabuko lapho amalungu eqembu athola amathuba okubophezela futhi abonise amasiko acebile avela emazweni awo.
Izinga lobugebengu lase Dubai
I-Dubai ingenye ye imizi ephephile ukuhlala kuyo, ngezinga lobugebengu elincane. Izinsizakalo zokuphepha lapha ziphumelela kakhulu ukuqinisekisa ukuthi izakhamuzi nezokuvakasha zigcina umthetho. Ngokusobala, abantu kufanele bazi ukuthi bavikelekile kungakhathaliseki ukuthi bakuphi emhlabeni kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi uhlala edolobheni lapho kunakekelwa khona izindaba zokuphepha futhi imizamo isenziwa njalo ukuze kuthuthukiswe ukuphepha.
Kunemisebenzi eminingana eDubai edinga ukusebenza sekwedlule isikhathi noma ukusebenza amashifu, futhi bazi ukuthi idolobha liphephile indawo kuzokuvumela ukuthi uhambe ngebhizinisi lakho elijwayelekile ngaphandle kokukhathazeka kakhulu. Ukuba yidolobha eliphephile kusho nokuthi kuzoba nokuzethemba okwengeziwe ekukhuliseni imindeni lapha. Kunezikhungo nezingqalasizinda eziningana ezenza iDubai indawo lapho ungaphila khona, usebenze futhi uhlale nomndeni wakho. Ngakho-ke, uma ucabanga ngokufuduka nomndeni wakho uya e-Dubai akunasizathu esiningi sokwenza lokho.
Imithombo: I-Dubai Police Instagram
Isiphetho e Dubai
IDubai iyisikhungo esikhulu sebhizinisi nokuhweba esifundeni esiseMiddle East, yingakho izinkampani eziningi zamazwe ahlukahlukene zenziwa amakhanda noma zinamagatsha edolobheni. Isi-Arabhu nesiNgisi kukhulunywa kabanzi lapha. Ukusebenza futhi ehlala e Dubai izokunikeza ukuqina okuqinile nokudalulwa okudingayo ukuze uncintisane endaweni yokusebenza yomhlaba. Ukusebenza eDubai kuzokuhlomisa ngobungcweti nezimilo ezidingekayo to ukuqhuba umsebenzi wakho ezingeni elilandelayo. Abantu abaningi basebenzisa i-Dubai njengetshe elihamba phambili lokuthuthela kwamanye amazwe abakhetha, njengoba izinqubo zilula kakhulu izakhamuzi ezihlala noma ezisebenza lapha. Ngokuchayeka ngamazwe ngamazwe, kulula ukusebenza noma kuphi emhlabeni.
Izwe elinamathuba angapheli, iDubai isalokhu iyindawo yokwakha imisebenzi yamaphupho. Kunamathuba amaningana okuqashwa ngamaphrojekthi wokwakha aqhubekayo, ezokuvakasha, izihambi, ubuchwepheshe kanye nezinye eziningi. Nge I-Expo2020 nje ekhoneni, nangaphezulu, amathuba amaningi okuthutha umsebenzi wakho wephupho e-Dubai. I-UAE iyonke izwe elibekezela kakhulu elikhuthaza ukuhlukahluka ngakho ungathola abantu bazo zonke izinkolo lapha, benendawo yokukhulekela.
Kulabo abathanda kakhulu ukuba namabhizinisi, awushiywanga ngaphandle. Ukwenza ibhizinisi eDubai yenziwe lula ngokulula imizamo ehlukahlukene eyenziwe nguhulumeni ukugqugquzela ukubamba iqhaza kwezinhlangano ezizimele kanye nezomphakathi emisebenzini yamabhizinisi. Lokhu kubonakala ngenani labatshalizimali abasebenza eDubai kanye namabhizinisi endawo nawasekhaya avela futhi aqhakaza. Ingqalasizinda ingaphezulu kwe-notch, futhi njengesizinda esikhulu sendiza, iDolobha lisendaweni ekahle ukwenza lula ukuhamba emhlabeni jikelele. Izinga lempilo lilungile, futhi izindawo zokungcebeleka zilula ukuzithola.
Ngu: Theresa R. Fianko
(Ukuxhumana Kokukhangisa, Umlobi, Umdali Wokuqukethwe)
Dubai City Inkampani manje ihlinzeka okuhle iziqondiso Imisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.